သင် Single ဖြစ်နေတာ ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲကပြေးမလွတ်ဘူး ဟုတ်! 😅 – Trend.com.mm
သင် Single ဖြစ်နေတာ ဒီအကြောင်းရင်းတွေထဲကပြေးမလွတ်ဘူး ဟုတ်! 😅
Posted on August 9, 2018 August 9, 2018 by Noel
Single ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ဘာလို့ single ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတွေများစွာရှိပါတယ်။Trend ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော Single လေးတွေပါလား? 😉 တကယ်တော့ Single ဆိုတာဖြစ်ချင်တိုင်းလည်းဖြစ်လုိ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။ဒီလိုအကြောင်းရင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံမှSingle ဖြစ်လို့ရတာပါ။ဒါဖြင့် Single ဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ စာဖတ်သူပရိသတ်ကြီးလည်း ဘာလို့အခုချိန်ထိတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာ ဖြေပေးခဲ့နော်
* ရွေးချယ်စရာတွေများနေလို့ 🤭(အယ့်လယ်)
*ရွေးချယ်စရာမရှိသေးလို့ (ကိုယ်ကလည်းကြိုက်တဲ့သူမရှိ ကိုယ့်ကိုလာကြိုက်တဲ့သူကလည်းမရှိ)
*လမ်းခွဲပြီးတာ ကြာလှသည့်တိုင် အသည်းကွဲနေတုန်း၊ဖီးလ်လို့ကောင်းနေတုန်း
*အလုပ် ဒါမှမဟုတ် ကျောင်းစာမှာပဲအာရုံစိုက်ထားလို့
ကဲ သင်က ဒီအကြောင်းအရာတွေထဲက ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် Single ဖြစ်နေတာတုန်း?
ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ပဲ Single ဖြစ်ဖြစ်ပါ။အားမငယ်ပါနဲ့။ရည်းစားရှိရင်ပြီးရောဆိုပြီး တကယ်မချစ်ပဲလည်းလျှောက်မတွဲနဲ့ဦးနော်။Single ဘ၀ရဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမှတ်လို့။ဒီတော့ သင့်အပေါ်တကယ်သစ္စာရှိရှိချစ်နိုင်မယ့်သူကိုမတွေ့မချင်း၊သင်ဘယ်လောက်တွန်းထုတ်တွန်းထုတ် အဝေးကိုထွက်မသွားမယ့်သူကိုမတွေ့မချင်း၊သင်ချစ်သလောက်သင့်အပေါ်ပြန်ချစ်နိုင်မယ့်သူကိုမတွေ့မချင်း၊သင့်ကို စိတ်ရင်းနဲ့တကယ်ဂရုစိုက်ပြီးစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေပေးမယ့်သူမတွေ့မချင်း စောင့်ပါ။ဒီလိုစောင့်နေတဲ့အချိန်အတွင်း ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုယ်၊ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုယ် မြင့်သထက်မြင့်အောင်ကြိုးစားပါ။ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပိုပြီးချစ်ပါ။စိတ်ရှည်ပါ။သင့်အတွက် ဖူးစာရှင်က တစ်နေရာရာမှာရှိနေပါတယ်။အချိန်မှန်နေရာမှန်ရင်တွေ့ဆုံရမှာပါ။အချစ်ကိုမရှာပါနဲ့။အချစ်က သင့်ကိုရှာပါလိမ့်မယ် ❤️
Single ဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျအောကျမှာ ဘာလို့ single ဖွဈနရေတာလဲဆိုတဲ့အကွောငျးရငျးတှမြေားစှာရှိပါတယျ။Trend ပရိသတျကွီးထဲမှာရော Single လေးတှပေါလား? တကယျတော့ Single ဆိုတာဖွဈခငျြတိုငျးလညျးဖွဈလို့ရတာမဟုတျပါဘူးနျော။ဒီလိုအကွောငျးရငျးတှနေဲ့ပွညျ့စုံမှSingle ဖွဈလို့ရတာပါ။ဒါဖွငျ့ Single ဖွဈနရေတဲ့အကွောငျးရငျးတှကေိုပွောပွပေးသှားမှာဖွဈလို့ စာဖတျသူပရိသတျကွီးလညျး ဘာလို့အခုခြိနျထိတဈယောကျတညျးဖွဈနရေတာလဲဆိုတာ ဖွပေေးခဲ့နျော
* ရှေးခယျြစရာတှမြေားနလေို့ (အယျ့လယျ)
*ရှေးခယျြစရာမရှိသေးလို့ (ကိုယျကလညျးကွိုကျတဲ့သူမရှိ ကိုယျ့ကိုလာကွိုကျတဲ့သူကလညျးမရှိ)
*လမျးခှဲပွီးတာ ကွာလှသညျ့တိုငျ အသညျးကှဲနတေုနျး၊ဖီးလျလို့ကောငျးနတေုနျး
*အလုပျ ဒါမှမဟုတျ ကြောငျးစာမှာပဲအာရုံစိုကျထားလို့
ကဲ သငျက ဒီအကွောငျးအရာတှထေဲက ဘယျလိုအကွောငျးကွောငျ့ Single ဖွဈနတောတုနျး?
ဘယျလိုအကွောငျးနဲ့ပဲ Single ဖွဈဖွဈပါ။အားမငယျပါနဲ့။ရညျးစားရှိရငျပွီးရောဆိုပွီး တကယျမခဈြပဲလညျးလြှောကျမတှဲနဲ့ဦးနျော။Single ဘဝရဖို့ဆိုတာ လှယျတာမှတျလို့။ဒီတော့ သငျ့အပျေါတကယျသစ်စာရှိရှိခဈြနိုငျမယျ့သူကိုမတှမေ့ခငျြး၊သငျဘယျလောကျတှနျးထုတျတှနျးထုတျ အဝေးကိုထှကျမသှားမယျ့သူကိုမတှမေ့ခငျြး၊သငျခဈြသလောကျသငျ့အပျေါပွနျခဈြနိုငျမယျ့သူကိုမတှမေ့ခငျြး၊သငျ့ကို စိတျရငျးနဲ့တကယျဂရုစိုကျပွီးစဈမှနျတဲ့မတ်ေတာတှပေေးမယျ့သူမတှမေ့ခငျြး စောငျ့ပါ။ဒီလိုစောငျ့နတေဲ့အခြိနျအတှငျး ကိုယျ့တနျဖိုးကိုယျ၊ကိုယျ့အရညျအခငျြးကိုယျ မွငျ့သထကျမွငျ့အောငျကွိုးစားပါ။ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပိုပွီးခဈြပါ။စိတျရှညျပါ။သငျ့အတှကျ ဖူးစာရှငျက ဈနရောရာမှာရှိနပေါတယျ။အခြိနျမှနျနရောမှနျရငျတှဆေုံ့ရမှာပါ။အခဈြကိုမရှာပါနဲ့။အခဈြက သငျ့ကိုရှာပါလိမျ့မယျ
ချစ်ပေမယ့်လည်း ဒါတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင် အဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့…
စူပါဟီးရိုး Shazam ကို ကြည့်ဖို့ ရင်ခုန်နေကြပြီလား ?